सफलताको तिर्खा - मनोरञ्जन - नेपाल
म्युजिक भिडियोमा हिट भएपछि फिल्ममा फड्को मार्ने इच्छा कुन मोडललाई नहोला र ? पुष्प खड्कालाई पनि त्यस्तै रहर थियो । त्यसैले सहायक भूमिकामै सही, फिल्म अझै पनिमा काम गरे । तर, परिणाम सुखद आएन । फिल्म व्यावसायिक रुपमा निर्बल साबित भयो नै, पुष्पकै अभिनयले पनि प्रशंसा पाएन । तापनि, तुलसी घिमिरेले दर्पणछाया २ मा मुख्य भूमिका दिएर उपकार गरे । घिमिरेजस्ता ‘भेट्रान’ निर्देशकसँग सहकार्य गर्न पाउनु आफैँमा सुखद थियो । तर, यो फिल्मको हालत अझै पनिको भन्दा फरक रहेन । छविराज ओझा निर्मित मंगलम्ले चाहिँ आफ्नो मंगल गर्ने आशा थियो पुष्पको । विडम्बना ! यो फिल्म कहिले प्रदर्शन हुने टुंगै भएन । गत दसैँको फूलपातीमा रिलिज हुने भनिएको थियो, छक्का–पञ्जा २ का कारण ४ फागुनमा पुग्यो । यो मितिमा दयाहाङ राई अभिनीत कान्छी आउने भएपछि मंगलम्को प्रदर्शन फेरि अनिश्चित भएको छ । भलै, नयाँ रिलिज मिति २५ फागुन तोकिएको छ । यता मंगलम् सरेको सर्‍यै, उता पुष्प कुरेको कुर्‍यै । क्या फसाद !